UMnu Thataone Edwards we-Kilasi lango-2006, obeliqhamukisa eNyakatho ye Kapa, nobehambele lo mcimbi evunule isintu nobebonakala ebusweni ukuthi uyaphuphuma injabulo.
UNksz Jasmin Persad wekilasi lango-1979 yena uthe: ‘kuyinjabulo kakhulu ukubuya eNyuvesi ikakhulukazi kwiSikole sezoMculo – kubuyisa leya micabango. Lo mcimbi uwumqondo omuhle kakhulu ngoba usinika ithuba lokuthi siphinde sihlangane sincokole nabangani bethu ngezakudala.’
Oka-Persad njengamanje ufundisa isiNgisi kodwa ekuqaleni ufundise umculo emazingeni aphansi. ‘ngiyohlala njalo ngitusa ngincoma lokho okwakwenzeka eSikoleni sezoMculo kanye nakho konke engakufunda lapha.’
USolwazi Nogwaja Zulu oyi-Dini kanye neNhloko kuso iSikole wamkele izihambeli waphinde wahalalisela labo abadl’umhlanganiso endimeni yezomculo. Ubakhuthaze ngokuthi baqhubekele phambili benze iNyuvesi izigqaje ngabo nokuthi baphinde baxhumane nehhovisi elingenhla, phecelezi – alma mater
Ngesikhathi somcimbi, bekukhon’ ezikaqed’isizungu zethulwa ilabo abaneziqu kanye nabangani balesi Sikole. Okuhlab’umxhwele nokube amazwibela omcimbi kube inkulumo ebiwumlando eyethulwe uSolwazi Christopher Ballantine.
Lezi ezingasoze zabuna, zisuse uhlevana lwamahlaya kwizethameli njengoba oka-Ballantine ecobelele ngolwazi alususele ekusungulweni kweSikole ngo-1972 kanye nempumelelo yaso kuze kube imanje kanye no’buso’ obusha obukhona.
Lowo onguMqondisi noyisikhulu sezokuxhumanisa iNyuvesi, uNksz Nomonde Mbadi, uthathe ithuba lokuthi athule ngokusemthethweni i-Music Chapter.